ဘယ်ဓာတ်ဆားကို ဘယ်အချိန်မှာ သောက်ရမလဲ | OnDoctor
By Dr. Kaung Htet Naing	 On Apr 18, 2019 Last updated May 23, 2020
ရာသီဥတုက ပူပြင်းအိုက်စပ်လာသည်နှင့်အမျှ မောင်ဒေါက်တာ့ ဆေးခန်းကို အပူဒဏ်ကြောင့် ရောဂါခံစားရသူတွေ အတော်များများရောက်လာကြသည်။။
‘အကို့ရောဂါက ရာသီဥတုပူပြင်းလွန်းလို့ မောပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတဲ့ရောဂါပါ။ Heat exhaustion ခေါ်တယ်ဗျ။ အဲဒါ ဓါတ်ဆားရည် သောက်ရမယ်ဗျ…….. အဲအစ်မကကျတော့ ဝမ်းလျှောပြီး ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးလို့ မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်ဖြစ်နေတာ အဲဒီတော့.. ဓါတ်ဆားရည်သောက်ရမယ်ဗျ…. သြော် ဦးလေးလား ဦးလေးကတော့ချွေးထွက်များပြီး သွေးပေါင်တွေကျလို့ ခေါင်းမူးနေတာပဲ ဆိုတော့….ဓါတ်ဆားရည်များများ သောက်ရမယ်ဗျ’
ထိုသို့ မောင်ဒေါက်တာက လာသမျှလူနာတိုင်းလိုလိုကို ဓါတ်ဆားရည်သောက်ဖို့ပဲ ပြောပြောနေတော့ ဆေးခန်းတွင်အကူလုပ်နေသော ကိုလူမောင်က နည်းနည်း မေးခွန်းထုတ်ချင်လာပုံရသည်။
‘ကိုယ့်ဆရာက လာသမျှ လူနာတိုင်း ဓါတ်ဆားရည်တိုက်နေတော့တာပဲနော်။ ဆေးခန်းမှာ ဆောင်ထားသမျှတောင် ကုန်တော့မယ်။ ဟိုးအရင်တုန်းက ဗမာဆရာတွေဆို လက်သုံးတော်ဆေးတစ်မျိုးတည်းနဲ့ ရောဂါအကုန်ပျောက်အောင်ကုနိုင်လို့ ဆေးတလက်ကိုင်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးတယ်ဗျ။ ကိုယ့်ဆရာလည်း ဓါတ်ဆားရည်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ၉၆ပါးအကုန်ကုနိုင်ရင်တော့ ဓါတ်ဆားဆရာမောင်ဒေါက်တာ ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေမှာဗျနော်…ဟို…စတာပါ ဆရာ..စတာပါ’
ကိုလူမောင်လည်း မောင်ဒေါက်တာ့မျက်နှာမှာ စိတ်ဆိုးသည့်အမူအရာကို မြင်လိုက်ရသည့်အတွက် ချက်ချင်းပင် စကားကို ပြန်လျှောချရင်း နောက်ပြောင်ဟန်ပြုလိုက်ရသည်။
‘သည်မယ် ကိုလူမောင်။ ခင်ဗျားက ဓါတ်ဆားရည်တစ်ထုပ်ရဲ့အစွမ်းကို အထင်သေးတာကိုးဗျ။ ဟိုးအရင် ဓါတ်ဆားမပေါ်ခင်ခေတ်ကဆို လူတွေမှာ ရေနဲ့ဆားဓါတ်ကိုဖြည့်တင်းနိုင်မယ် ထိရောက်တဲ့ ေဆေးစွမ်းကောင်းမရလို့ သေကုန်ကြတာအများကြီးပဲဗျ။ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောသမားတွေဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။ အခုလို အမှုန့်လေးတစ်ထုပ်ကို ရေဖျော်ပြီး သောက်လိုက်ရုံနဲ့ လူပေါင်းများစွာ အသက်ချမ်းသာရာရနေတာဗျ။ ဒါကို လူတော်တော်များများက သဘောမပေါက်ကြဘူးလေ။ ခင်ဗျားပြောသလို ဓါတ်ဆားက ရောဂါအကုန်မကုနိုင်ပေမယ့် အခုလို နွေရာသီမှာ အပူရှိန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါတိုင်းလိုလိုကတော့ ဓါတ်ဆားတိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ သည်လောက်လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ကုနိုင်တဲ့ ကုထုံးမို့ ကျွန်တော်က လာသမျှကို သောက်ဖို့ပြောနေရတာပါ။ ဈေးနှုန်းကလည်း လူတိုင်းတတ်နိုင်တဲ့ အနေအထားပဲလေ’
‘အဲဒါဆိုကျွန်တော်လည်း အခုတစ်လော မောလွယ်နှုန်းလွယ်ဖြစ်နေတာ..ကြာပြီ။ ဓါတ်ဆားရည်သောက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ် ထင်တယ်နော်ဆရာ’
‘အကြမ်းအားဖြင့်တော့ လူတိုင်းက နေပူရှိန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ပင်ပန်းမှုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ချွေးထွက်များပြီး၊ မောတယ်နှုန်းတယ်၊ အာခေါင်ခြောက်တယ် စသည်ဖြင့် ဖြစ်ရင်.. ဓါတ်ဆားရည်က သောက်ထားလိုက်တာ မမှားပါဘူး။ အဲ. ဓါတ်ဆားရည်မသောက်သုံးသင့်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေတစ်ချို့တော့ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေက နာတာရှည်နှလုံးရောဂါဝေဒနာသည်တွေ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါပြင်းထန်နေတဲ့လူတွေ၊ ရေဖျဉ်းဆွဲသလိုမျိုးဖောရောင်နေတဲ့လူတွေ၊ နောက်ပြီး ဓါတ်ဆားနဲ့ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ဖူးတဲ့လူတွေ စတာတွေ ပေါ့။ ဒါမျိုးအခြေအနေတွေကို သံသယဖြစ်ရင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှ ဓါတ်ဆားရည်ကို သောက်သုံးသင့်တယ်ဗျ’
‘ဒါဆို သွေးတိုးသမားတွေကော ဆရာ။ ဓါတ်ဆားသောက်လို့ရလား။ ကျွန်တော့် ဦးလေးဆို သူ့မှာ သွေးတိုးရှိတယ်ဆိုပြီး ဘယ်ဓါတ်ဆားမှ မသောက်ဘူးဆိုပြီး ရှောင်ကြဉ်နေတယ်ဆရာ’
‘ဓါတ်ဆားဆိုတဲ့အတိုင်း သောက်လိုက်ရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဆားဓါတ်တွေရောက်သွားတော့ သွေးပေါင်က အနည်းနဲ့အများတက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်အောင် သွေးတိုးတဲ့ အနေအထားမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်မှာတကယ်သာ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးတယ်၊ အပူဒဏ်ကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်သွေးတိုးရှိလည်း ဓါတ်ဆားသောက်လို့ရတယ်လို့ ဆိုပါရစေ။ ပိုပြီးတော့ စိတ်ချချင်ရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့သွေးပေါင်တိုင်းပြီး လိုအပ်တယ်လို့ ညွှန်ကြားရင် စိတ်ချလက်ချသောက်လို့ရပါတယ်ဗျ’
‘ဟုတ်ပါပြီဆရာ။ ဒါပေမယ့် လူတော်တော်များများက ဘီပီအိုင်ဓါတ်ဆားဆို အရသာမကြိုက်လို့ မသောက်ချင်ကြဘူးဆရာ။ သီးစုံဓါတ်ဆားတွေကြတော့လည်း အာနိသင်နည်းတယ်လို့ ပြောကြတော့ ကျွန်တော်ဆို သီးစုံဓါတ်ဆားနဲ့ဘီပီအိုင်ဓါတ်ဆား အပြာထုပ်ကို ရောသောက်တယ် ဆရာ…အဲဒါရတယ်မဟုတ်လားဟင်’
‘ဟာ ကိုလူမောင်ကလည်း ကျွန်တော့်ကို ဘေးမှာထားပြီး လုပ်ချင်ရာတွေ လုပ်နေပြီ။ မရဘူးဗျ။ ဓါတ်ဆားဆိုတာ လူခန္ဓာကိုယ်ထဲက အရည်ဓါတ်ရဲ့သိပ်သည်းဆအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထုတ်လုပ်ထားတာ။ သူ့အချိုးအစားတိုင်းဖျော်ပြီး သောက်မှ ကိုယ့်အသွေးအသားနဲ့ တစ်သားတည်းပျော်ဝင်သွားတာဗျ။ မဟုတ်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရည်သိပ်သည်းဆတွေ ပြောင်းလဲပြီး လူမှာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။ အရည်ဆိုတာ ရောလို့ရတာရှိတယ်။ မရတာရှိတယ်လေ။ ကိုလူမောင်က ဒါမျိုးတွေကျွမ်းပါတယ်။ မရောသင့်တာတွေရောရင် နှစ်ပင်လိမ်ပြီး ဒုက္ခရောက်တတ်လေဗျာ’
‘ဟာ ဒေါက်တာကလည်း မသိရင် ကျွန်တော်က အရက်စပ်ကျွမ်းကျင်သူလိုလိုဘာလိုလို ဖြစ်ကုန်ပြီ။ အမှန်ကတော့ ကျွန်တော်ကပြင်းရင် ဘာသောက်သောက် ရေတို့ အချိုတို့ ရောသောက်နေကျဆိုတော့ ဟဲဟဲ ဓါတ်ဆားကိုလည်း ရောကြည့်တာပါ’
‘မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဓါတ်ဆားရည်ဆိုတာ အလွယ်ပြောရရင် သွေးထဲကိုတိုက်ရိုက်ပျော်ဝင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားတာဗျ။ အဲဒီတော့ အကောင်းဆုံးက သွေးကလက်ခံနိုင်တဲ့အချိုးအစားအတိုင်း သောက်မှ စိတ်ချရတယ်ဗျ။ ကိုလူမောင်အ ချိုသောက်ချင်ရင် ကလေးတွေအတွက်အရသာပါထည့်ပြီးသား ထုတ်ထားတဲ့ ဓါတ်ဆားအထုပ်လေးတွေရှိတယ်လေ။ အဲသည်ဓါတ်ဆားတွေက အချိုးအစားက ပုံမှန်လူကြီးဓါတ်ဆားအတိုင်းပဲဆိုတော့ သောက်လို့ရတယ်။ ကလေးတွေကြိုက်အောင်သာ အရသာထည့်ထားတာ’
‘သြော်မသိပါဘူး ကျွန်တော်က အဲဒါလေးတွေသောက်ရင် နှစ်ထုပ်လောက်သောက်မှ လူကြီးတစ်ယောက်အတွက် လုံလောက်မယ်ထင်တာ။ တော်သေးတာပေါ့ အများကြီးသောက်ကြည့်တော့မလို့။ ဒါနဲ့ တစ်ဆက်တည်း တစ်ခုလောက်ထပ်မေးချင်တယ်ဆရာ။ တစ်ချို့ဝမ်းလျှောတဲ့လူတွေမှာလေ။ ဓါတ်ဆားသောက်ရင် ပိုပြီးဝမ်းသွားတတ်ကြဆိုပြီး ပြောကြတယ်။ အဲဒါဆိုရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ’
‘သြော် အဲဒါက လွယ်ပါတယ်။ ဓါတ်ဆားကို ပိုပြီးတော့သာ တိုးတိုက်လိုက်ပါ’
‘ဟင် ဖြစ်ပါ့မလားဆရာ။ ဝမ်းတွေပိုပြီးသွားလာရင် ဘယ့်နှယ့်လုပ်မလဲ’
‘တကယ်တော့ ဓါတ်ဆားသောက်လို့ဝမ်းသွားတာထက်၊ ဝမ်းသွားတာများလို့ ဆားဓါတ်တွေ ဆုံးရှုံးရတာကို ဓါတ်ဆားနဲ့ပြန်ဖြည့်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတာပါ။ အူလမ်းကြောင်းကရောင်နေရင် အစာရေတစ်ခုခုဝင်တာနဲ့ ဗိုက်နာပြီးဝမ်းသွားချင်သလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကို တခြားဆေးဝါးတွေနဲ့ကုလို့ရပါတယ်။ ဓါတ်ဆားတော့ ဖြတ်လိုက်လို့မရဘူး။ ဓါတ်ဆားက ဝမ်းလျှောတဲ့လူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်နတ်ဆေးပဲ’
‘သည်လိုဆိုတော့ ဓါတ်ဆားက တော်တော်စွမ်းနေတာကိုး။ လူတိုင်းလိုလို အိမ်မှာ လွယ်လင့်တကူ ဓါတ်ဆားထုပ်တွေ ဆောင်ထားသင့်တာပေါ့နော်’
‘ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဓါတ်ဆားထုပ်တွေ ဝယ်ဖို့လက်လှမ်းမမှီတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တောင်မှ အိမ်တွင်း ဓါတ်ဆားရည်ပြုလုပ်နည်းဆိုတာပါ ရှိတယ်ဗျ။ အခုခေတ်မှာ ဘယ်မှာမဆို ဓါတ်ဆားထုပ်တွေ ဝယ်လို့ရနေပြီဆိုပေမယ့် မပြေးသော်ကန်ရာရှိ၊ အရေးပေါ်ကြုံရင် အဆင်ပြေအောင် မှတ်ထားတာ ပိုကောင်းတာပေါ့။ အဲဒါကတော့ ဘယ်လိုပြုလုပ်ရသလဲဆိုရင် ရေသန့်တစ်လီတာထဲကို သကြားလက်ဖက်ရည်ဇွန်း ခြောက်ဇွန်းထည့်၊ ပြီးရင် ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်ကို ထည့်ပြီးရောဖျော်ရပါတယ်။ အဲဒါကိုပဲ ဓါတ်ဆားရည်အဖြစ် သောက်လို့ရပါတယ်ဗျာ’
‘ကောင်းပါပြိ ဆရာ။ ကျွန်တော်လည်း အတော် ဗဟုသုတ ရသွားပါပြီ။ အခုလောလောဆယ်တော့ ဟိုမှာလူနာတစ်ယောက် ရောက်လာလို့ ကြည့်လိုက်ပါဦး ဆရာ’
မောင်ဒေါက်တာလည်း ကိုလူမောင်နှင့်အာလူးဖုတ်လိုက်ရသည်မှာ အာခြောက်သွားပြီထင်သည်။ အသင့်ဖျော်ပြီးသား ဓါတ်ဆားရည်ဗူးလေးကို မော့သောက်လိုက်သည်။ ထိုစဉ်မှာပင် လူနာအသစ်က ဝင်လာလေသည်။
‘ကျွန်တော် နှာစေးချောင်းဆိုးပြီး ဖျားနေလို့ဆရာ’
လူနာက စကားစပြောလိုက်သည်နှင့် ကိုလူမောင်ကဆေးဗီဒိုထဲမှ ဓါတ်ဆားထုပ်တစ်ထုပ်ကို အသင့်ယူထုတ်ထားလိုက်လေသည်။ မောင်ဒေါက်တာလည်း ထိုအရာကို မြင်ပြီး ပြုံးလိုက်မိကာ…
‘ကဲ အကိုက ကိုယ်ပူနေတယ်ဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးနေမှာပဲဗျ။ အဲသည်တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဓါတ်ဆားရည်လေးတော့ သောက်ဖို့လိုမယ်ဗျ’ ဟု အလိုလို ပြောလိုက်မိလေတော့၏။